Ukubaluleka kweGrama elungileyo kunye neziphumlisi kwiBhlogi | Martech Zone
Ukubaluleka kweGrama efanelekileyo kunye neZiphumlisi kwiBlogging
NgoMgqibelo, nge-6 kaFebruwari ngo-2010 NgoLwesithathu, Aprili 30, 2014 UErik Deckers
Abantu abandaziyo bayazi ukuba ndingangaba yigrama kunye neziphumlisi. Ngelixa ndingazukuya kude ndiyokulungisa esidlangalaleni abantu (ndibaphatha gadalala ngasese), bendisaziwa ngokuhlela imiqondiso enamagama angabhalwanga kakuhle, iziposiso ezibekwe endaweni engeyiyo, kunye neempazamo ngokubanzi.
Ke, ngaphandle kwesizathu sokuthetha, ndihlala ndizama ukuqinisekisa ukuba ukubhala kwam kuya kwi-snuff yegrama.
"Kodwa iiblogs zimele ukuba azikho sesikweni kwaye ziyancokola."
Hayi kangako njengoko unokucinga. Kukho amashishini amaninzi amkela ukubhloga, kwaye bazama ukwenza umfanekiso wokuthembeka kunye nokuthembeka. Kwaye uyakholelwa okanye ungakholelwa, abathengi baya kugweba ukubanakho kwequmrhu liphela nokwenza eyona njongo iphambili kwigrama kunye nopelo lwenqanaba eliphantsi le-PR.
“Owu Nkosi yam, umise umntu othabathayo inxaxheba! Asisayi kuphinda sithenge iimveliso zakho kwakhona! ”
Awundikholelwa? Nika ingqalelo kumagqabantshintshi nakweyiphi na ibhlog yezopolitiko ngexesha lonyulo lukamongameli.
Ngelixa kungafuneki ukuba ubabeke ezi ntlobo zabantu (kufuneka bahlaliswe endaweni yoko), kuya kufuneka wenze umfanekiso wobuchule kunye nobungcali. Kwaye oko kuthetha ukuba kufuneka upele amagama ngokuchanekileyo, kwaye usebenzise igrama efanelekileyo kunye neziphumlisi.
Ngamanye amaxesha ndiza kuthumela iDoug i-DM malunga ne-apostrophe engachananga okanye igama elingalunganga kwelinye lezithuba zakhe zeTekhnoloji yeNtengiso (ethi xa ujonga emva mhlawumbi kutheni Ndiya kohlwaywa Ndacelwa ukuba ndibhale eli nqaku).
Kukho ezininzi Iimpazamo zegrama, ukuba uzenza, ngokunyanisekileyo zikwenza ubonakale usisidenge (Amagama eCopyrightblogger, hayi awam). Izinto ezinje ngokuchasene nayo kwaye uchasene neempazamo zakho ekufuneka uzazi ngcono kunokwenza.
Uninzi lwabantu luya kuthi igrama kunye nopelo kwiiblogi azibalulekanga. Ukuba kufanelekile ukuba singacwangciswanga kwaye sibuyiselwe umva, kwaye ayinamsebenzi kwaphela.
Kulungile ukuba ubhala ibhlog yakho malunga nobomi bakho, kwaye ulindele kuphela abahlobo abambalwa ukuba bafunde. Unokuba ngokungacwangciswanga ngendlela ofuna ngayo, wenze iimpazamo kwiminqweno yentliziyo yakho, kwaye uzalise iiposti zakho Isifungo esingaxhamliyo. (Ejonge e nina, IiBhlogs.)
Kodwa ukuba uthetha ngeshishini lakho, iqumrhu lakho, okanye ishishini lakho, kuya kufuneka ugcine yonke into icocekile kwaye ingenazimpazamo kangangoko kunokwenzeka.
Ayisosono ukuba wenze impazamo. Amaxesha amaninzi ndenze iimpazamo kwiibhlog zam, ngakumbi apho ndithetha ngokubaluleka kwegrama efanelekileyo kunye neziphumlisi. Kodwa ndingasoloko ndibuyela umva kwaye ndiyicoce. Yeyona nto intle ngokubhloga: akukho nto isisigxina, njengemagazini okanye incwadana. Uxwebhu olumi ndawonye. Umnyhadala wezithuba ezineminyaka emithathu ubudala.
Ke ukuba wenza impazamo okanye ezimbini, ungalahli ithemba. Ngaba nomntu omthembileyo ujonge kubo kwaye akunike ingxelo ethembekileyo. Emva koko buyela emva kwaye ulungise nantoni na oyiphosileyo ngexesha lokujikeleza kwakho kwesibini sokuqala.
Kuba ngokuchanekileyo okanye ngokungalunganga, i-nitpickers iphaya. Kwaye beza kuwe.
U-Erik yi-VP yokuSebenza kunye neeNkonzo zoBuchule ze IiNkonzo zeBlog Blog. Uye wabhloga ngaphezulu kweminyaka esithoba (nangaphambi kokuba kubizwe ukubhloga), kwaye ebengumbhali opapashiweyo ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ungumbhali wamaphephandaba ohlekisayo, kwaye ubhale amanqaku aliqela eshishini, imidlalo yeqonga, imidlalo yeqonga kanomathotholo, kwaye ngoku usebenza kwinoveli. Uncedise ukubhala ukuThengisa nge-Twitter kwiiDummies, kwaye uhlala ethetha ngokubhloga nakwimithombo yeendaba zentlalo.
Ukulandela umkhondo Ababhali beWordPress abaninzi ngeGoogle Analytics
Feb 6, 2010 ngo-11: 54 PM
Andikwazi ukubeka kumagama indlela endiyibulela ngayo iliso lakho ngokufumana iimpazamo zam! Ndidla ngokubhala kumjelo wokuqonda kwaye ndijonge ngaphezulu kweempazamo zam ngelixa ndingqina ngokulula njengaxa ndandizibhala. Sisuntswana sesiqalekiso. Enkosi ngokulunga kubahlobo!
Xa ndisisityebi kwaye ndidumile, kuya kufuneka ndikubuyekeze! 😀